Akwụsịrị m akụrụngwa weebụsaịtị m na-akọ akụkọ na nyocha maka Diib | Martech Zone
Akwụsịrị m Akuko Weebụ na Mgbakọ Dị Oké Mkpa na Ngwa Nyocha Maka Diib
Na ego furu efu jikọtara ya na COVID-19, aghaghị m ịtụleghachi ngwaahịa ndị m na-eji nyocha, nyochaa, kọọ akụkọ, ma bulie saịtị m na nke ndị ahịa m. Anọ m na-etinye ọtụtụ narị dollar kwa ọnwa yana ọtụtụ ngwaọrụ iji mee nke a. Ọzọkwa, nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ nwere ọtụtụ akụkọ na nhọrọ - mana m ga-agagharị na data iji chọta ndụmọdụ bara uru m nwere ike iji rụọ ọrụ na saịtị.
Yabụ, M na-akwụ ụgwọ a ton nke ego… na ọ bụghị n'ezie na-azịza m chọrọ. M na njakịrị banyere nke a n'oge gara aga… na nchịkọta ngwá ọrụ dị nnọọ mma ajụjụ engines na ọ bụghị azịza engines. Ọ dị gị n'aka dị ka onye nyocha iji chọpụta ma butere ohere dị iche iche ụzọ mgbe igbanyere n'ime data, nke, nzacha, ma tulee omume ndị ọbịa.
Achọrọ m ka m doo anya ka m na-akọwa ngwaahịa a achọtara m - Diib. Enwere ọtụtụ puku ihe ị nwere ike iji weebụsaịtị wee meziwanye ọhụhụ, uto, na ntụgharị. Offọdụ nyocha ahụ na-achọkarị ka mmadụ tụgharịa data n'ime omume.
Diib: Azịza Injin
Vidio a si Diib mgbe ha malitere 5 afọ gara aga na-enye ụfọdụ nghọta na ikpo okwu na otu ọ nwere ike isi nyere azụmahịa gị aka:
M debanyere aha maka n'efu Diib Akaụntụ ma masịrị ya ozugbo na nzaghachi ọgụgụ isi nke ikpo okwu na-enyeworị n'ime nkeji nke ịbanye. Diib amalite site na nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gi na ichota ohere kasịnụ ime ka ahia gi bawanye. Diib kewara n'ime isi ihe anọ dị mkpa:
Azịza Injin - ngwa nchoputa di omimi gha enyocha saiti gi ma weputa usoro ogugu ahaziri site na inye gi azịza ya.
Analytics - Diib ọ bụghị naanị ịlele data, ha na-agbanwe ya ka ọ bụrụ ezigbo dollar maka azụmahịa gị gara aga, ugbu a, na ọdịnihu. I nwekwara ike ihu otu ichoro na ulo oru gi.
Ọganihu Ọganihu - Nọgidenụ na-esochi nke niile mgbalị gị na-amụta otú ị pụrụ ịhụ otú ị na-na na na na-abịa! Ka ị na-ahụkwu ọganihu ị na-ahụ, otú ahụ ka ị ga na-enwekwu ọganihu!
Librarymụta Ọbá akwụkwọ - Ọ bụrụ n ’ị bụ onye na-eme ihe ị na-eme, Diib nwekwara ndụmọdụ, ngwa ọrụ na nkuzi na ntanetị. Ha nwere nnukwu oba akwukwo nke 1000s nke vidiyo, edemede, akwukwo ocha, na akwukwo.
Diib na-anapụta nyocha dị mfe, mmetụta dị elu, akụkọ, na ihe ngosi iji mee ka ị mara etu ị si eme na ihe ị ga-eme. Na diib ™ ị maara uru saịtị gị bara uru yana etu azụmahịa gị si arụ ọrụ n'ịntanetị gị. Na diib na-emepụta atụmatụ mmepe omenala maka azụmahịa gị n'ịntanetị.
Lelee Ahụike Weebụsaịtị gị
Isi ihe dị na mkpesa ahụ bụ nkwado mbụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị ezigbo mma. Diib eme nke a site na nyochaa isi ihe ndị a nke weebụsaịtị dị mma:
Asambodo SSL: Nwere ike ịnweghị saịtị echedoro ma ọ bụ asambodo SSL gị awụnyeghị nke ọma. Diib'S scanning engine bụ ezigbo picky mgbe ọ na-abịa nche na ga gwa gị ma ọ bụrụ na ha hụrụ ihe ọ bụla na njehie ndị dị ịrịba ama ma na-emetụta gị rankings ma ọ bụ ime ka onye na njikere ke esenowo nchọgharị.
Ọsọ ekwentị: Azịza Engine achọpụtazi gị mobile ọsọ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọsọ mkpanaka gị, Diib ga-eme ka ị mara ihe.
Ngalaba Authority / Backlinks: Akara ngosi ndị a na-agwa gị ugbu a Moz Domain Authority na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke backlinks na-atụ aka na weebụsaịtị gị. I nwekwara ike ịhụ ndepụta nke backlinks kachasị mkpa gị.
Facebook / Google My Business Sync: ma ọ bụrụ na ị synced abụọ ndị a dị mkpa data isi mmalite, Diib ga-eme ka so gh?
Mapmap: Nyocha a na - agwa gị ma anyị chọpụtara ma ọ bụ saịtị saịtị maka weebụsaịtị gị. Sitemaps na-enyere Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ aka iri ari na weebụsaịtị gị.
Keywords: Nke a na - agwa gị ole mkpụrụokwu websaịtị gị edepụtara na google. Nwere ike ịhụ ihe ruru 150 nke Keywords kachasị mkpa.
Ndepụta ndepụta: Nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ na adreesị IP nke na-agwa gị ma a na-enyefe ozi ịntanetị gị na igbe mbata ndị ahịa gị. Ọ bụrụ Diib achọpụta na ozi ịntanetị gị nwere ike ịga na igbe spam kama igbe igbe ha ga-agwa gị yana nyere gị aka idozi nsogbu ahụ.
Chọọ, Ebumnuche, Mobile, na Ebumnuche mpaghara
Ozugbo m debere saịtị m, Diib jikọtara ya na Google Analytics, Google Business, na Facebook iji nye nghọta, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka, na azụmaahịa mpaghara. Uzo a choputara ufodu ebumnuche nke m ga-enyocha tinyere otutu uzo iji muta otu esi:
Diib nyochaa nyocha Facebook iji chọpụta mgbe isiokwu m ga-akacha emetụta.
Diib nwere ọgụgụ isi nke gosipụtara m na COVID-19 anaghị emetụta okporo ụzọ weebụsaịtị m.
Diib achoputara m ihe njiko di n'ime ka m mezie.
Diib amata ụfọdụ backlinks nke nwere ike ịgbu egbu nke m nwere ike ịjụ.
Diib bụ Uru Pụrụ Iche
Purists ga-ekwu na ngwá ọrụ dị ka nke a abụghị ihe zuru ezu. Nke a nwere ike bụrụ eziokwu maka nnukwu ngalaba dị mgbagwoju anya na ụlọ ọrụ asọmpi siri ike. Mana imerime azụmaahịa anaghị arụ ọrụ ebe ha kwesiri ịlele akụkụ ọ bụla nke ọnụnọ ha n'ịntanetị… ha na-arụ ọrụ ha.
Maka ọnụahịa efu Diib, ọnụ ahịa karịrị nnọọ ọnụ ọgụgụ nke nyiwe dị na ya. Ọ bụ nlekota ahụike, ọnụahịa, amụma, ebumnobi, na ịdọ aka ná ntị ga-eme ka onye nwe saịtị na-arụ ọrụ n'ime otu afọ iji melite uto weebụsaịtị ha na uto nke azụmaahịa ha.
A free diib akaụntụ na-enye:
Atụmatụ eto eto eto - Enwere ohere ịnweta nkpuchi na ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi kwa ụbọchị nke na - egosi gị otu esi eme ngwa ngwa na ntinye ego.
Nlekọta weebụsaịtị - Nweta ịdọ aka ná ntị maka ọnya okporo ụzọ na-adịghị ahụkebe, backlinks agbajiri ma ọ bụ spammy, nsogbu arụmọrụ, nchekwa, ma ọ bụ ọbụlagodi Google search algorithms mmelite! Ntinye ọ bụla na-agụnye usoro a ga-eme iji dozie nsogbu ahụ.
Imel Snapshot kwa izu - Nọgide na-eme ka ị mara maka ohere itolite na nsogbu ọ nwere.
Akara Ahụ Ike Kwa .bọchị - diib smart smart algorithm na-ahụ ọnọdụ weebụsaịtị gị n'oge.
Ịnyocha - iji tụnyere arụmọrụ nke weebụsaịtị gị na ebe nrụọrụ weebụ ndị yiri ya na ụlọ ọrụ gị.
Akaụntụ Diib Pro na-efu $ 19.99– $ 29.99 / ọnwa dabere na okporo ụzọ weebụsaịtị yana ọ na-enye ihe niile na akaụntụ efu, yana:
Atụmatụ Uto - Nweta zuru oke na ịdọ aka na ntị kwa ụbọchị na ebumnuche ndị na-egosi gị otu esi eme ngwa ngwa na njem na ntinye ego.
Ruo weebụsaịtị 30 - Hụ otu ebe nrụọrụ weebụ gị niile na-eme n'otu ihuenyo.
Enyemaka ndị ọkachamara n'oge ọ bụla - Free 24/7 nweta onye ọkachamara raara onwe ya nye.
elekọta mmadụ media - diib na-enyocha arụmọrụ gị n'ezie ma na-enye gị ụzọ ụzọ omenala iji too ọwa a dị oke mkpa.
SEO & isiokwu - Nyocha na nkwalite nkwalite dabere na adịchaghị Moz & Semrush data.
Lelee Ahụike Weebụsaịtị gị ugbu a!
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ dị mpako nke Diib.
Tags: azịza engineCOVID-19Diibnyocha googleGoogle Analyticsgoogle azụmahịa mip ndepụtamobile nyochamobile ọsọnyocha nchịkọtanchịkọta mmadụSSLnlekota weebụsaịtịnjikarịcha weebụsaịtị
Mbo mbuli gị Ahịa na arụpụtaghị ihe ndị a 6 Hacks